Kulan ay yeeshen dhalinyarada Puntland oo Garoowe ka dhacay. | Hoyga Arimaha Bulshada
Kulan ay yeeshen dhalinyarada Puntland oo Garoowe ka dhacay.
Kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen dhalinyaro badan oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ka dhacay.
Kulankan oo lagu qabtay xarunta wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiin ay kamid yihiin wasiirrada maamul wanaagga, dhalinyarada iyo madax kale oo badan.
Wasiiru dowlaha maamul wanaaga ee Puntland Maxamed Ciise Faarax Gaashaan oo ugu horeyn kulankaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta ay dhalinyaradu kaga jiraan horumarinta bulshada iyo sida ay lagama maarmaan u tahay inay isku duubnaadaan.
Dhegeyso Codka Wasiiru Dowlaha Maamul Wanaaga Puntland
Mr Gaashaan ayaa sidoo kale ka sheekeeyey ururadii dhalinyarada ee la asaasay xiligii xornimada la qaatay kadib iyo weliba qaababkii lagu dhisay, wuxuuna sheegay in dhalinta Puntland ay tahay inay sameystaan ururo noocaas oo kale oo ay ku mideysan yihiin si uu waxqabadkoodu u muuqdo.
Wasiirka wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Cabdiweli Xirsi (Indho-guran) oo isna kamid ahaa mas’uuliyiintii kulankaas ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedada ay maanta kulankan dhalinyarada ugu qabteen.
Wuxuuna sheegay inay tahay sidii ay dhalintu ugu diyaar garoobi lahaayeen xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan maalinta berri ah iyo weliba sidii ay uga tashan lahaayeen qaabka ugu haboon ee loo dhisi karo dallad weyn oo mideysa dhalinyarada.
Dhegeyso Codka Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Puntland
Mr Indho-guran ayaa ugu danbeyntii ku booriyey gabdaha inay muujiyaan kaalinta ay kaga jiraan dhalinyarada isagoo xusay inay lagama maarmaan tahay in la helo fikirka iyo waxqabadka gabdhaha da’yarta ah ee Puntland.
Kulanka maanta ka dhacay xarunta wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo Sportska ee Puntland ayaa kusoo beegmaya xilli maalinta berri ah loo dabaal degi doono maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed taas oo magaalooyin badan oo Soomaaliya ku yaal oo ay Garoowe ka mid tahay laga xusi doono.
This entry was posted on May 15, 2012 by jooqle in Dhacdooyin.